Indlwana eseceleni ye-Lakeside e-Maine - I-Airbnb
Indlwana eseceleni ye-Lakeside e-Maine
Northfield, Maine, i-United States
Yakhiwe njengendawo yokuphumula eseceleni, i-Fulton Lake Cottage ikunikeza umuzwa wokuthi unalo lonke ichibi lakho. Jabulela ukuthula nokuzola ekhaya elithokomele elimiswe ngobuciko bangempela be-Maine nama-antiques.
I-Fulton Lake Cottage iyikhaya elihle echibini elikhumbuza izindlwana eziningi zechibi le-Maine 's Vacationland. Sizamile ukufaka umoya wangaphandle we-Maine ngomlando wayo wasebusika nezemidlalo zasehlobo ekhaya lethu echibini. Uma ungena, uzobona izintambo zakudala zokudoba nama-reels, ama-sleds nama-skate, ama-skis kanye nama-snowshoes azokukhumbuza ngokunikezwa kuka-Maine kokuzijabulisa kuzo zonke izinkathi zonyaka. Eziningi zalezi zinto sezikhona emndenini wethu amashumi eminyaka futhi manje sezike zaba ama-antiques namaqoqo. I-Fulton Lake Cottage yikhaya elithokomele emazingeni amathathu. Izinga eliyinhloko liyinhliziyo yekhaya elinekhishi elinomusa netafula elikhulu lomndeni endaweni eyodwa evulekile. Ama-panels angokwesiko-mpilo amboza izindonga nezindawo zaphansi zepulangwe zinikeza imfudumalo nobuhle. Ikhishi elinakho konke linendawo evulekile yokupheka kanye nesiqhingi lapho amalungu omndeni angahlangana khona.
Iphansi eliyinhloko lihlanganisa ikamelo lokulala elilodwa elinombhede ogcwele, i-dresser kanye nekhabethe lezingubo zokugqoka. Indlu yokugezela enkulu isesitezi esiyinhloko futhi. Phonsa iminyango yase-France ekhishini futhi ivulekele iveranda ehlotshiswe ngomoya ukuze uzwe ukuthi ichibi liphithizela ngenkathi upheka noma uphumula. Ungangena futhi emphemeni omkhulu onekhava usuka kuvulande ohloliwe. I-deck imboziwe futhi inendawo enkulu yokuzijabulisa kwangaphandle.
Ngaphezulu kwendawo eyinhloko kukhona ama-loft amabili. Izingane zithanda ileli ephephile eholela ku-loft encane. Lena indawo encane enombhede wosuku lapho ungafunda khona incwadi noma ngisho nokuphumula.
Izitebhisi endaweni yokudlela ziholela ku-loft enkulu. Le ndawo inemibhede emibili egcwele yokungena ngemvume futhi ihlotshiswe ngesitayela se-Maine lumber ehlotshiswe nge-buffalo plaid bedspreads. I-loft enkulu ilala abantu ababili noma abashadile.
Ngezansi ezingeni eliphansi yigumbi lomndeni elinefenisha yesikhumba ethokomele-osofa ababili abagcwele nezihlalo ezimbili ezilula. Lena indawo enhle yokungcebeleka lapho abantu bengaphumula khona futhi bakhulume noma babukele ama-DVD kumabonakude wezikrini eziyisicaba. Kunetafula elincane lemilenze yesango elingakhishwa ngenxa yemidlalo noma amaphazili. Izinga eliphansi liphinde libe ne-log yegesi engajatshulelwa esimweni sezulu esihle.
Ikamelo lokulala elikhudlwana likuleli zinga eliphansi. Leli kamelo lokulala linombhede omkhulu kanye nekhabethe elikhulu. Eceleni kwekamelo lokulala yigumbi lokuhlanza izingubo nelokusetshenziswa elinomshini wokuwasha nokomisa. Izinga eliphansi liphinde libe neminyango yase-France ehamba iye ezingeni eliphansi futhi liqhele ngezinyathelo ezimbalwa ukusuka emzileni oya edokini nasechibini.
Ngaphandle kunikeza izindlela eziningi zokuphumula. Idekhi enkulu emboziwe enomjikelo olengayo, ifenisha yangaphandle, kanye nesethi yokudlela yangaphandle inikeza indawo enkulu yokujabulela izinsuku nobusuku obuhlaba umxhwele be-Maine. Chitha isikhathi emphemeni noma ulethe i-lobster ekhaya! Ungabuye ujabulele isimo sezulu sakusihlwa nomlilo emgodini womlilo.
I-Fulton Lake Cottage izungezwe yizikrini ezinhle ezibeka ukhaphethi wezinsimbi emzileni wokuhlobisa uye echibini futhi enuka kamnandi ngephunga lamahlathi ase-Maine. Kukhona idokodo onqenqemeni lwamanzi ongabhukuda kulo inhlanzi, ukubhukuda noma ukuqalisa i-kayak.
I-Fulton Lake Cottage isethwe kuma-acre angu-3 ahlotshiswe ngamapulangwe angabonakali ezindlini zomakhelwane endlini.
In a nutshell, I’m a down to earth “Hoosier” that likes to vacation in Maine. I’m also, the partner to a terrific guy, a father of two amazing teenagers and a biochemist at an awe…
Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ngesikhathi sokuhlala kwakho ukuze sikusize nganoma yiziphi izidingo noma imibuzo mayelana nendlwana noma indawo ezungezile.